FAQs - Ningbo Jing Gu nylon Rod Co., Ltd.
Phone: + 86-574-83039393
Qiimaha Our way isbadali ku xiran tahay arrimo kale oo suuqa sahayda iyo. Waxaan kuu soo diri doonaa liiska qiimaha updated ka dib markii aad nala soo xiriir wixii macluumaad dheeraad ah.
Waayo, kaydka, annagu uma shuruudaha MOQ. Sida caadiga ah, waxaan mar walba kaydka on dhengedihii caddaan iyo madow.
Haa, waxaan ku siin karaan warqadaha ugu oo ay ku jiraan shahaadooyin, warbixinta baaritaanka, miiska hantida wax soo saarka iyo dukumentiyada kale ee aad loogu baahan yahay.
Waa maxay waqtiga aad hogaanka?
Sida caadiga ah, 5 ilaa 10 maalmood, waayo, kaydka. Haddii aadan haysan waxaan u dhiganta stock, waxaan u baahan doonaa 15 ilaa 20 maalmood wax soo saarka. Waxay ku xiran tahay tirada ka mid ah si ay.
Waxaad samayn kartaa lacag bixinta waa in lala xisaabtama our bangiga ama PayPal.
Haddii wadarta guud ka yar yahay $ 3,000, marka la eego lacagta waa 100% TT ka hor. Haddii wadarta ka badan yahay $ 3,000, marka la eego lacagta waa TT 30% deposit, dheelli-bixinta ka hor inta wareejinta alaabta.
Waxaan ballanqaadayso tayada noo soo saarka iyo adeega. Waxaa naga go'an waa in aad ku qanacsan tahay wax soo saarka iyo la dhiso xidhiidh wanaagsan oo muddo dheer aad la. Si aad u noqoto lamaane isku halayn karo halkii qeybiyaha ah.
Waa maxay siyaasadda saamiga aad?
Waayo, waxyaabaha caadiga ah, waxaanu kuu soo bandhigi karaa muunad yar oo lacag la'aan ah. Laakiin waxaad u baahan tahay inaad bixiso kharashka xogo ka. Waayo, muunad kartoo, waxaan ka qaadaan doonaa kharashka shaybaarka iyo kharashka dhiibay warqaadayaal.
Cinwaanka: MAYA. 287, Zhonggongmiao Road, Degmada Yinzhou, Ningbo 315192, Shiinaha
Shiinaha dhoofinta iyo FAIR
125aad Canton Fair Exhibition Cente ...
Shiinaha (Yuyao) International Plastics Expo ...
Xarunta Exhibition: Yuyao International ...
Talooyin , Products Featured , Sitemap , Mobile Site
Sheet caaga , Ptfe Tube , Guddiga Polypropylene , dhimatay Goynta Board , nylon 6 Rod , Sheet PCV , All Products